Madaxweynaha kooxda Olympic Lyon oo ka hadlay heshiiska Memphis Depay ee Barcelona – iftiin fm
Madaxweynaha kooxda Olympic Lyon oo ka hadlay heshiiska Memphis Depay ee Barcelona
September 16, 2020 September 16, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Madaxweynaha kooxda Olympic Lyon ee Jean-Michel Aulas ayaa daaha ka qaaday hadal layaab leh ee ku saabsan heshiiska uu Memphis Depay ugu biirayo naadiga Barcelona inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Magaca Memphis Depay ayaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo kooxda Barcelona, kaddib codsi ka yimid tababaraha cusub naadigaa reer Catalonia ee Ronald Koeman.
Wararka ayaa sheegaya in Lyon ay dejisay qiimaha ay Memphis Depay kaga iibineyso Barcelona, kaasoo gaaraya 30 million euros, iyadoo la ogyahay in qandaraaska ciyaaryahanka reer Holland ee kooxdiisa Lyon uu dhacayo xagaaga soo aadan.
Jean-Michel Aulas ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, wuxuu kaga hadlay wararka Depay la xiriirinaya inuu ku biirayo kooxda Barcelona, wuxuuna yiri:
“Madaxweynaha Barcelona Josep Maria Bartomeu wuxuu ii sheegay subaxnimadii Axadii ee la soo dhaafay in Barça ay si ba’an u dhibaataysan tahay dhaqaale ahaan, sababa la xiriira dhibaatada caabuqa Korona, isla markaana aysan heysanin wax ku filan oo ay dalab kaga gudbiyaan Memphis Depay”.
Waxaa xusid mudan inay jiraan warbixino lagu xaqiijiyay in Ronald Koeman uu dib u cusbooneysiiyay kalsoonida uu ku qabo weeraryahankiisa reer Uruguay ee Luis Suarez, oo la hadal haayay inuu ka tagayo Camp Nou
← Xiddiga Kurt Zouma oo afka furtay
Waaxda DCI-da oo gacanta ku dhigeen nin iska dhigayey qareen →
Iftiin FM Radio Livestream
IFTIIN FM: Your browser does not support the audio element.